Linux Mint inopera Gumiguru ichitaura nezve kuvandudzwa muXed uye Xreader | Linux Addicts
Linux Mint inotanga Mbudzi ichitaura nezve kuvandudzwa muXed uye Xreader, uye nezvimwe zvishoma
pablinux | 01/11/2021 12:00 | Noticias
Kunyangwe paine vhezheni yakavakirwa paDebian (LMDE), Linux mint yakavakirwa paUbuntu. Canonical yakatanga a itsva vhezheni yako yekushandisa system pana October 14, uye ndipo apo Clement Lefebvre akatanga kuva dzinenge zvidimbu zvose kugadzira kusunungurwa kutsva kwake kuchasvika pakupera kwegore. Tichifunga kuti kwasara mwedzi miviri kuenda, hazvishamise kuti chinyorwa chemwedzi uno taura zvinhu zvishoma.
Ino Mbudzi, "Clem" akabata zvakanyanya nekugadzirisa bug mune yake chinyorwa. Somuenzaniso, taura kuti dzakawanda zvigamba akatumirwa kubva kuLinux Mint 20.2 kuenda kuLMDE 4, kubva kumapurojekiti akaita secjs, sinamoni-screensaver, muffin, sinamoni, nemo, xapps, mintreport, uye bulky. Imwe yeaya mapeche yakakonzera kudzoreredzwa mumuffin, chimwe chinhu chavari kushanda pairi kugadzirisa nekukurumidza sezvinobvira.
Linux Mint Debian Edition 4 ichavandudza Firefox 78 ESR kusvika v94
Kune rimwe divi, Lefebvre anove nechokwadi chekuti vanoteerera, kana kunyanya kuverenga, vashandisi vavo pablog, avo vanotevera vhezheni dzeXed (text editor) uye Xreader (gwaro rinoona) richasanganisira sarudzo yekuvanza iyo menyu bar. Kana yakavanzwa, chishandiso chinoshandisa nzvimbo shoma uye inokodzera pane yakaderera resolution skrini; nekudzvanya Alt kiyi, iyo bar inooneka, asi inonyangarika kana yaburitswa. Kana iri mupepeti, Xed inogona kuchinja pakati pematabhu akazaruka uchishandisa Ctrl + Tab uye Ctrl + Shift + Tab.
Chishandiso chekubika chinotarisa masisitimu kuti ive nechokwadi chekuti zvese zvinoenderana (semuenzaniso specs) uye inozivisa vashandisi kana zvisiri izvo. Uye chimwe chinhu chinobata munhu wese, anochengetedza kana kwete, Firefox 78 ESR ichakwira kuv94 browser. LMDE haichashandisi ESR vhezheni; ichashandisa shanduro yakafanana neLinux Mint. Debian anovimba neiyo ESR vhezheni, asi Lefebvre nechikwata chake vanofanirwa kunge vakafunga kuti nguva refu inopfuura pasina hutsva hutsva, saka vakachinjira kune yakagadzikana kana yakajairika vhezheni.
Kana iri iyo inotevera vhezheni yekushandisa system, nhasi hapana chavakambotaura, asi zvinozivikanwa kuti, semakore apfuura, ichasvika pakisimusi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint inotanga Mbudzi ichitaura nezve kuvandudzwa muXed uye Xreader, uye nezvimwe zvishoma
Chinonakidza ndechekuti vari kuyedza neMuffin zvinokwanisika kuti vanotanga nerutsigiro rwekutanga kubva kuWayland
Ndinokutendai zvikuru nekushandura nhau dzevandinoda zvikuru: D
Iwe unoshandisa KDE neTeregiramu isingakubvumidze kuti uchinje nzira yekurodha? Edza IZVI
yekutanga OS 6 inogadziridzwa muna Gumiguru nekuvandudzwa kweAppCenter, Email uye Mapikicha, pakati pevamwe